I-MyYappyDog: I-CRM Yezenhlalo Yama-Real Estate Agents | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 2, 2014 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Kukhona ukuqala okusha okuthola ukudonsa okuthile e-Indianapolis nge Abathengisi bezindlu, futhi ibizwa Inja Yappy Yami. Uma ungahlanganisa ipulatifomu yokuxhumana elula efile neplatifomu yokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende engenamqondo, une-CRM Yezenhlalo ebizwa nge-My Yappy Dog.
Abathathu kwabane kumakhasimende e-real estate agency athi bazophinde benze ibhizinisi ne-ejenti yabo, kepha yi-3% kuphela eyenza! UDawn Schnaiter, Co-Umsunguli we Inja Yappy Yami.
Uma ama-ejenti enesixazululo esingabizi futhi esilula sokugcina ukuxhumana namakhasimende abo, bebezotholakala lapho labo bantu bethuthelwa kwenye indawo, bekhula beyikhaya elikhudlwana, noma lapho umndeni noma abangane babo befuna ukuthengisa. Ukuphela kwento okumele yenziwe i-touch base ngezikhathi ezithile… futhi Inja Yappy Yami asenzeni njalo.
The Ipulatifomu ye-CRM Yezenhlalo ifaka amandla okuthumela kuzo zonke iziteshi zakho zenhlalo, ibhokisi lokungenayo lomphakathi ukuthola izithombe, amandla okuthumela nokukala imikhankaso ye-imeyili eningi, nomphathi wokuqukethwe. Ukusebenzisana kungafezwa ngokusetshenziswa kwe-akhawunti yomsizi (ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe) ngezimvume ezithile zomsebenzisi kulokho abakwazi nabangakuboni. Futhi ngaphezu kwakho konke, ukubika ngomsebenzi wakho, ukuthengisa nezindleko zakho kufakiwe!
Ikhono leCRM likhulu, likuvumela ukuthi ukhombise amaklayenti abaluleke kakhulu futhi uhlele imisebenzi yokuxhumana nabo ngezikhathi ezithile.
3 Ukuchofoza ku-Yap!
Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Yezenhlalo
Njengakuqala okukhulu kakhulu, iMy Yappy Dog yasungulwa umuntu owayenesidingo - Dawn the Real Estate Agent - Riann Stroud - umphathi womkhiqizo ohlanganise ipulatifomu! Ngiyakuthanda ukuqala okwakhiwe ngoba abasebenzisi bakhungathekile ukuthi asikho isisombululo esitholakalayo.
Inja Yappy yami inikeza umuntu ngamunye, iqembu kanye nebhizinisi zamanani!
Qaphela: The Inja Yappy Yami ipulatifomu ilunge kakhulu kunoma yimuphi usonkontileka noma umhlinzeki wesevisi… ngesibonisi esivele singenziwa ngezifiso
Tags: imeyili Marketingmyyappydogukuthengisa izindluabahlinzeka ngemisebenzii-social crmukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende kwezenhlaloibhokisi lokungenayo lomphakathiumshicileli wezenhlalo
Nakhu ukuthi awushiswa kanjani nge-Influencer Marketing